Dagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandDagaal culus oo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug oo dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo
November 8, 2016 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Taangiyada ciidamada Puntland ee ku sugan duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo. [Sawirka: Archive]
Gaalkacyo-(Puntland Mirror) Dagaal culus oo u dhaxeeya ciidamada Puntland iyo maleeshiyada Galmudug ayaa saakay oo Talaado ah dib uga qarxay duleedka koonfureed ee magaalada Gaalkacyo ee gobolka Mudug, sida ay ilo-wareedyada sheegayaan.
Dagaalka saakay ayaa daba-socda asbuucyo dagaalo ah oo ka dhacayay gobolka Mudug oo u dhaxeeyay labada dhinac.
Dagaalka manta oo Talaado ah ayaa imaanaya maalin kadib markii madaxweynayaasha Puntland iyo Galmudug ay ku wada-hadleen taleefoon oo ay ku amreen taliyeyaashooda ciidamada in si deg deg ah loo joojiyo xabada.
Asbuucaan bilowgiisii, ugu yaraan 25 qof ayaa lagu dilay, oo badankood ay ahaayeen askar ka katirsan dhinacyadii dagaalamay, kadib markii dagaal uu ka qarxay duleedka koonfureed ee magaalada.
Muddooyinkii dambe, Gaalkacyo waxay daris la noqotay dagaalo u dhaxeeya Puntland iyo Galmudug. Magaalada ayaa waxay u qeybsantaa labo qeybood, qeyb waxaa maamusha dowladda Puntland halka qeybta kalena ay sheegato maamulka yar ee Galmudug.
Garoowe-(Puntland Mirror) Madaxweynaha dowlada Puntand Cabdiweli Maxamed Cali iyo wefdi uu hoggaaminayo ayaa maanta dib ugu soo noqday caasimada Puntland, Garoowe. Madaxweynaha iyo wefdigiisa ayaa waxaa garoonka kumeel gaarka ah Kanoonko ee duleedka Galbeed [...]